Liivarpuul peenaalitiin 5-4 Cheelsii injifatee Suppar Kaappii fudhate - BBC News Afaan Oromoo
Liivarpuul peenaalitiin 5-4 Cheelsii injifatee Suppar Kaappii fudhate
Tapha Suppar Kaappii Istaanbullitti Liiverpuuliifi Cheelsii walitti fideen Liivarpuul seenaa isaa keessatti si'a afraffaaf injifate.
Karra eegaan Liivarpuul Adriyaan rukuttaaa peenaalitii Taamy Abrahaam goolii ta'uu irraa baraaruun ijifachuu garee isaaf shoora olaanaa baheera.
Suppar Kaappiin yeroo jalqabaatiif murteessitoota dubaraan
Taphni sa'aa guutuun lama qixxee kan xumurame yoo ta'u, Oliivar Jiruud dursee Cheelsiif lakkoofsiisee kan ture ta'uus Saadiyoo maanee gooliiwwan lamaan galcheen si'a lama gareen isaa qixa akka ta'u gargaareera.
Waancaan Suppar Kaappi kun leenjisaa Liivarpuul Jargaan Kilooppiif ijnifannoo Chaampiyoonsi Liigii ji'a lama dura argataniin booda waancaa isaa lammataati.
Taphni gareelee lamaan kana gidduutti taphatamu yeroo mara muddama kan qabu yoo ta'u, taphoota dhiyeenyattii taphatan 10 irratti garaagarummaa gooliiwwan heddun wal injifatan.
Torbee lama dura goolii eegaan Liivarpuul Adriyaan, kilaba isaa duranii West Haamiin erga gadhiifamee booda garee hin qabu ture.
Kiloopp dargaggeesa ganna 32 kana goolii eegaa isaanii Alisaniif muuxannoo haa qooduuf ofitti fudhatan.
Tapha baniinsaa Piriimeerliigii bara kanaarratti goolii eegaan jalqabaa Liivarpuul miidhamuu isaa hordofee goolii eegaa jalqabaa ta'uutti yeroo dhufu Adriyaan waahillan isaa waliinillee haalaan wal hin barre.
Gooliiwwan lamaan taphaan irratti lakkaawaman hambisuuf yaale milkaahuu baatus, rukkuttaa Peenaalitii Abrahaam baraaruun isaa goota isa jechisiiseera. Bakka Alisaan hin jirrettis filannoo jalqabaa akka ta'u waan mirkaneesseef fakkaata.
Firaappaart nama ajaa'ibsiifteetti
Murteessituun biyya Firaans Isteefanii Firaappart dubartii jalqabaa tapha dhiirotaa sadarkaa akka kanaa taphachiste ta'uun seenaa dalagdee jirti.
Dubartiin ganna 35 kun gargaartoota ishee dubaraa lamaan waliin taphichi rakkoo malee akka xumuramu gochuu dandeesseetti.
Murteewwan qajeeloo murteessaa turterraa kan ka'ees, VAR murtee jijjiirsisuuf fayidaarra hinoolle.
Tapha kanarratti Nigooloo Kaantee taphata cimaa tapha kanaa ta'eera.
Saadiyoo Maaneen taphataa Afrikaa isa jalqabaa erga bara 2006 tapha Suppar Kaappiirratti goolii galche ta'eera. 2006' tti Freedriik Kaanuteetu lakkoofsisuu danda'e.
Leenjisaan Liivarpuul Jaargan Kiloop ''taphichi gareelee lamaaniifu ulfaataa ture. kaayyoon mo'achuu ture, dhumarratti mo'anneerra,'' jedhan.
Taphni kun yeroo dabalataa akka qabaatu namni fedhu hin turre kan jedhan Kiloop, injifannoo argatanitti gammaduu himaniiru.
Leenjisaan Cheelsii Laampaard gama isan garee isaatti gammaduu ibsee kubbaan milaa xiqqoos ta'u waan akka carraa of keessaa qaba jedhe.
Isteefaanii Firaappaart murteesituu tapha Suppar Kaappi har'aati
Saadiyoo Maanee - taphataa Senagaal fi Liivarpuul garee biyyaalessaa fi kilaba isaaf tajaajila guddaa kennaa ture, kaadhimamaa badhaasa BBC ta'eera
11 Sadaasa 2017
Viidiyoo Saadiyoo Maaneen gaafa taphachuu baate kilabii fi biyyi isaa yeroo miidhaman mul'ateera
Imaammati barnoota amma hojiirra olfamuuf jiru rakkoo jiru furaa?
Godaantoonni doonii dhidhimteerraa lubbuun hafan maal jedhu?